Metal - material ethandwa yesimanje ivumela ukuthi izinga ukumboza ophahleni futhi awuvikele amathonya ahlukahlukene. Kuye izici ukubukeka, ukufakwa, umbala nempilo Ungakhetha izinhlobonhlobo le nto. Yini metal kuyinto engcono yini okumelwe siyibheke lapho ukhetha?
Metal - material ukufulela yesimanje, lapho ingambozwa iyiphi bamisa ophahleni, okuyinto emthambekeni engaphansi kwengu-12 degrees. Through sekulingisa umbukwane Tile enamathela bafake metal ukumelana nokwethembeka high bayindlala kakhulu ekwakheni yesimanje. Yini metal kuyinto engcono iyiphi inketho afanele umklamo ethile ophahleni?
Metal - omunye impahla ethandwa yesimanje, okuyinto has eziningi izici. On the izakhiwo omuhle ka ezintweni zokwakha uphahla zihlanganisa:
Ifakeka. Ngenxa ubude kahle ishidi metallcherepitsa kulula ukufaka kuqhathaniswa nezinye izinto.
imibala Rich. Mhlawumbe lena inzuzo ebaluleke kakhulu le nto: abakhiqizi Tile yesimanje enze okungaphezu 10 imibala.
Yokuphila Isikhathi Eside Ise ukuphila. Metal kophahla - ikhambi kunenzuzo, ngoba uyakwazi iminyaka engaba ngu-50 lapho isebenze kahle.
Izindleko. Uma kuqhathaniswa nezinye izinto zokwakha eziningi intengo imali, ikakhulukazi uma ucabanga izindleko ingqikithi yonke ophahleni ikhekhe zensimbi.
isisindo okuphansi. izinto Iningi ukufulela abasakwazi esindayo, futhi lokhu has a isisindo ngamanani amancane kanye nezokwakha elula. Ngokuvamile imitha square lensimbi ukala mayelana 4-7 kg. Lokhu-ke kunciphisa izindleko zokuthutha.
Ukumelana kwezulu ozungeze umhlaba wethu. Indaba ine surface bushelelezi, okuyinto okushiya kalula amanzi neqhwa Udambisa. Ngaphezu kwalokho, ukusebenza kwe-ophahleni kungenzeka zonke izimo zezulu.
Ishidi ukujiya kudlala indima!
I ukushuba we metal - omunye izinkomba main, ukukhuluma esivuna ukukhetha lokhu noma ukuthi zinhlobo. Amazinga bathi ukushuba leshidi alikwazi ukuba ngaphansi kuka 0.5 mm. Kodwa emakethe yesimanje linikeza izinto of ukushuba nenkanyiso encane - 0.45 futhi 0.4 mm. Nokho, ukhetho lokuqala kuhle ukusebenzisa e ukwakhiwa yesikhashana, gazebos, emadlangaleni, kanti eyesibili wavuma ofanele ngisho ngalezi zinhloso.
I metal ishidi kungenzeka mkhulu. Ngokwesibonelo, Ruukki inikeza impahla ukuthi unesikhathi ukujiya mkhulu kunezinhliziyo 0.5 mm. Kubalulekile nokukhumbula ukuthi mkhulu ishidi, umthelela kancane ke bazonikezwa zokuthutha kanye umphetho ukucasha uzobe befikile.
Metal ikhiqizwa abandayo iphuma steel cwilisa hot galvanizing, okuyinto isidlulile zonke izinyathelo inqubo eyinkimbinkimbi. Ukuze uthuthukise ukumelana ukugqwala leyo nto, Abenzi camera ishidi phosphate ungqimba ke ziphathwe primer. Injongo yalo - ukukhuthaza adhesion kangcono zokuhlobisa polymer enamathela. Iphrofayela metal kuthabathela ecaleni emuva limbozwa ukuvenisha esobala esivikela ebusweni kusukela nomthelela lokukhanda. Ngaphandle, okungukuthi, ohlangothini front, usebenzisa zokuhlobisa anemibala polymer enamathela metal. Siqukethe izingqimba eziningana:
anticorrosion enamathela zokuzivikela;
Ezinemibala ezinengilazi zokuhlobisa esekelwe polymer;
Khumbula lapho kukhethwa ukuthi metal ukufulela akusho ngaso sonke isikhathi yonke izingqimba ngenhla - abanye abakhiqizi ngenhloso isicelo primer noma ungqimba phosphate, ngaleyo ndlela kuncishiswe izinga umkhiqizo.
Izinga lendwangu kuxhomeke endleleni ngokucophelela nomkhiqizi libhekisela senqubo yokukhiqiza. Ukusabalala kule nto linendima ebalulekile, futhi enye inkampani kanjani, kanti eyesibili - akukho. Yini metal kungcono ngenxa yalokho? Yiqiniso, omunye ephethe degree ezanele galvanizing - hhayi ngaphansi kuka 275 g zinc ngamunye 1 sq. m. I metal. Ngaphezu kwalokho, le nto njalo kusetshenzwe by izinhlobo ezahlukene engenhla enamathela zokuhlobisa. Okuvame kakhulu zihlanganisa:
Polyester: elula futhi enokwethenjelwa
Lona ethandwa kakhulu enamathela metal, olubizwa nangokuthi i-polyester koqweqwe lwawo. Isendlalelo engenhla polymer lisetshenzisiwe ukujiya esezingeni 25 microns. I enamathela lilimele kalula, isibonelo, ngaphansi kwethonya imihuzuko, kodwa kulula ukudweba. Isendlalelo polyester has a high ukugqwala ukumelana, UV-ukuzinza, kungenzeka isicelo kunoma yimuphi izimo zezulu. Abanye abakhiqizi ukunikela amashidi, ngaleso enamathela ugqinsi - 20 microns. Qaphela ukuthi lokhu enamathela alwanele ukusetshenziswa njengendlela material ukufulela.
A ezihlukahlukene-polyester ukhonza matte polyester, has a ukushuba emikhulu - 35 micrometer. Ngenxa yalokho, kuba livikela kakhulu emathonyeni ahlukahlukene, libhekene ductility kangcono. Inzuzo yayo endaweni ukubukeka elunge.
Pural emisha Finnish
Lokhu Finnish enamathela ungqimba has a ukushuba microns 50, okuhlala isikhathi eside, abushelelezi-isicwebezelisi matte ebusweni. zako - ngokungabi bikho imifantu lapho izimisele futhi ezisebenza ke, ngakho-ke Kunconywa ukuba asebenzise i-material nge enamathela enjalo ngisho ezindaweni ezingezinhle.
ophahleni Metal kungenziwa zimbozwe plastisol futhi ehlanganisa polyvinyl chloride futhi plasticizers. Lokhu ekhethekile enamathela: ukushuba ungqimba salo microns 200, ngakho ebusweni kungenziwa camera iphathini embossing. Ngaphezu kwalokho, it has Yizinga eliphakeme, kodwa umuzwa hhayi okuhle ngaphansi okushisa aphakeme. Futhi ngenxa yokuthi ukufulela eziyinsimbi akufanele isetshenziswe uma kushisa.
I enamathela has a ukushuba esiphezulu 30 microns, yakhiwa vinylidene fluoride futhi acrylic. Isici ehlukile - kuyinto ebusweni metallic ecwebezelayo ngaphansi okuyinto amelana imiphumela emibi futhi ingasetshenziswa ngaphansi kwanoma iziphi izimo zezulu.
Yini impahla kungcono ngokuya umbala izixazululo weJiyomethri? Akukho impendulo ecacile ngoba lezi nemingcele kuthiwa wabizela kuphela ukunambitha okuthandwa umninindlu. Umbala ethandwa kakhulu ezweni lethu sibomvu shades yayo, okufuna zikanokusho yesimanje. Kodwa kuwufanele ukukhumbula ukuthi imibala emnyama siyobuna elangeni, futhi enhle ikakhulukazi ngokumelene okwenza ezenzekayo kubukeka metal elikhanyayo.
Kusukela umbono we-geometry leyo nto - omunye kwendle kakhulu. Esikhathini ukukhiqizwa indima ebalulekile eyadlalwa ukunemba ntathu - ubude, ububanzi, ukuphakama uthayela iphrofayela bobunjwa ukujiya. Zonke lezi izinkomba ezibalulekile-product yakho yokugcina. Kunoma iyiphi ophahleni uyobheka obunobunye ucezu isikwele Tile metal, okuvumela ukwakha ngisho design okwenyanga ngokungavamile.
Kuye ukuphakama wave ingahluka ukuqina ishidi: impumuzo ephakeme, indaba iba ngaphansi nezimo. metal Modern inikezwe amafomu amabili ntathu: wave ezincane (50 mm) futhi kwakuza igagasi okusezingeni eliphezulu (ngenhla 50 mm). Ngesikhathi esifanayo yena noma isithombe sephrofayela nge wave lesinesitfombe-sibuko noma quin.
izinhlobo ezaziwa (amaphrofayli) metal
I version zakudala zonke izinhlobo uphahla - Tile "Monterrey", okuyinto uvezwa ezihlukahlukene imibala ezihlukile kanye ezinengilazi ezahlukene. Ukufaka lokhu okubalulekile lapped wenziwa, usebenzisa ngokucophelela battens, futhi uphawu esikhethekile okuthembekile yasibamba ngezikulufo. Kuyinto ethandwa kakhulu emakethe metal Russia. kubiza ruble 230 ngamunye imitha square.
Eyesibili metal ethandwa kakhulu - "Cascade". It ahluke amafomu rectilinear, efana nesigaxa ushokoledi. Kungcono ukuba isicelo kubekwa endaweni enkulu ophahleni. zako ezisemqoka kukhona evenness lephethini embossed nokuba iziteshi zokuhlobisa. Intengo metal - ruble 170 ngamunye imitha square.
Kukhona futhi izinguqulo ezibizayo yalesi material. Ngakho, izindleko metal, "Andalusia" iqala ruble ngamunye imitha square 300, emapheshana zenziwa mbumbulu tile zemvelo classical. It is zihlukaniswa khona zalapho yangaphakathi ezenza izindawo ezinhle ukufihla amalunga omzimba. Uphahla embozwe metal ubukeka integrally.
Ngaphansi ethandwa amaphrofayli "Spanish dune", "Bang", "Pamir", "Shanghai", njalo njalo. D.
Futhi ngubani nomkhiqizi?
Ukunquma okuyinto metal kungcono ukuba banake sha futhi umsuka impahla. Uma ufuna imikhiqizo zokukhiqiza isiRashiya, banake izinto Odintsovo ifektri ukwakhiwa engasindi. He khiqiza metal camera ne izingoma ethandwa kakhulu futhi wadala ngokuhambisana ubuchwepheshe bamuva. Le nkampani inikeza amaqoqo eziningana eziyingqayizivele ukwaziswa okuyoba izothatha iminyaka engu-15 maqondana nesondlo ezifanele.
Mera System - kuyinto metalocherepitsa ukukhiqizwa Swedish. Imikhiqizo ekhiqizwa kusukela amashidi steel 0.45 mm obukhulu, okuyinto lashukumisa nhlangothi zombili. A impahla iba isivikelo kwanoma iyiphi uphahla ongamelana ukwahluka sezulu kanye nomphumela kwezulu elikhulu.
Sekutholakele Finnish metal Poimukate. Ukukhiqizwa is ngaphakathi accordance nga yaseYurophu of ikhwalithi steel whereupon indaba embozwe ungqimba zokuzivikela zinc. I ukujiya ishidi - 0.5 mm, Tile nge wave okusezingeni eliphezulu, lapho ophahleni kuyoba bazwakale futhi ngobuningi. kukhethwe kahle ezinengilazi polymer ukwandisa ngokuphawulekayo ukuphila inkonzo phepha okwalotshwa kulo isiqinisekiso nxazonke 20-30 iminyaka.
Omunye ethandwa metal Finnish - Takotta brand. Yena yabakhanga ukubukeka: inkululeko ebanzi ekukhetheni imibala, ezihlukahlukene amaphethini ukuthi ukulingisa ngezinto zemvelo, amathayili ukunikeza look ezithakazelisayo. I ukujiya enamathela 0.5 mm isetshenziswa, ngakho-ke ngeke ukunikeza isivikelo kusuka ezihlukahlukene mathonya. Lokhu umkhiqizi uyazinaka eduze izinga imikhiqizo yayo, okuyinto okuye kwaba uqobo onesandla umhlabeleli.
Izibuyekezo eminingi emihle wathola imikhiqizo yenkampani Russian Grand Line, oveza amathayili Boxed To oda. Ukwakha uqhutshwa usebenzisa ithusi-zinc titanium, aluminium, intando metal ophahleni ezithakazelisayo kunoma yikuphi ukucushwa. Ekuqaleni ubheka amathayili ucezu esinophahla ezazenziwe ngethusi - impahla enkulu, okuyinto eyenza Ingaphandle eziyingqayizivele iyiphi ekhaya. Ngenxa ukuqina, kakhulu amakhemikhali izici, unenkululeko kunesidingo, Lingase lisetshenziselwe ophahleni ukumisa eziyinkimbinkimbi. I isikhathi eside kunazo zonke impahla - zinc-titanium ucezu-metal, nge azifani.
Baningi Izibuyekezo ezinhle mayelana Finnish inkampani Ruukki umkhiqizo, okuyinto inikeza Ukukhetha eziningi zensimbi. Izici zako ahlukile yokusebenza izici, ukubukeka stylish, kukhethwa impahla 7 amaqoqo. Yakhelwe ukuze ophahleni wabheka wekugcina, yesimanje nobunye.
Ngokuchibiyela okwakhiwa ngalo la mabhodi amalunga omzimba
Zingaki izitini wokwakha 1m3: kanjani ukuba abale ivolumu impahla
Ikhukhamba Ukudla: ukubuyekezwa, umphumela, ongakhetha isicelo
Indwangu Upholstery amabhokisi: ezihlukahlukene kanye izinga
Hot Springs, Krasnodar esifundeni - njalo efudumele. zokungcebeleka Eyingqayizivele esifundeni